Sidee baad u leedahay waan ku jeclahay Jarmalka? Saaxiibbada qaaliga ah, maqaalkan, waxaan kaga hadli doonnaa ereyada jacaylka ee Jarmalka. Maqaalladii hore, waxaan kuugu soo qornay farriimo jacayl iyo kalgacal Jarmal ah, haddii aad rabto, waxaad ka heli kartaa waxyaabaha ku habboon adiga oo baaraya mareegahayada iyo golayaasha Jarmalka.
sida loo dhaho waan ku jeclahay jarmal waan ku jeclahay waxaa lagu muujiyaa sida. waan ku jeclahay odhan waan ku jeclahay Means.
Bu ich liebe dich jumlada I ereyga "Ben"Waxay ka dhigan tahay, liebe Hadduu eraygu yahay lieben Waa isku -xidhka falka ee qofka koowaad ee keli ah, diik eraygu waa "adiga ku”Waxaa loola jeedaa. Sidaa darteed ich liebe dich xukunka Turkiga waan ku jeclahay waxaa loo tarjumay sida
Waxaad kaloo isticmaali kartaa tibaaxaha soo socda si aad ugu muujiso jaceylkaaga iyo kalgacalka qofka kale:
taasi waa run
Waan kuu xiisay.
Aad baad u macaan tahay
Aad baan kuugu xiisay.
Weligay waan ku jeclaan doonaa.
Ich ayaa mit dir leben
Waxaan rabaa inaan kula noolaado
Aad baan kuugu faraxsanahay.
ICH WAXA LAGU QAADO DICH NICHT VERLIEREN
Waan ku jeclahay, mana doonayo inaan lumiyo
HADDII WAX KA QAYB QAADANEYSO MEENEM HERZ
Qalbigayga ayaad ku jirtaa intaan noolahay